Imbali yeMgibe yoMculo
Khumbula i crunk?
Unamathuba okuva umculo womgibe. Ukuba uvile nayiphi na i-Future hits hits okanye nayiphi na i-Young Thug, sele uqhelene nomculo wengcingo.
Umculo womgibe ngumdlalo we-hip-hop ophumayo kwimeko ye-rap esezantsi kuma-1990. Uyazazi umkhondo wentambo ngokubethelwa kwinqabunga, ukukhwela, ii-808s, kunye ne-oodle ze-synthesizers.
Umgibe uthathe ingcambu yayo e-Atlanta, apho izinto ezifunwa yiGhetto Mafia kunye neDungeon Family zisebenzise kuqala igama ukuchaza izandi zazo.
Inkcazelo ye "Trap"
Eli gama liza ngqo kwizitrato. "Umgibe" ubhekisela kwindlu yeziyobisi, apho izidakamizwa ziphekwe kwaye zithengiswa. Ngaloo ndlela, abagibi baxakeka ngokuphindaphindiweyo malunga nezidakamizwa kunye nokubetha. Umzekelo: Ixesha elizayo "Hambisa loo nto."
Umxholo wengoma yomgibe awukhawulelwanga kwizifundo zomgibe. Iingoma zentambo nazo zichaphazela umgangatho okhulayo wokuhlala kwindawo. Iinkcukacha zomculo zomgibe zobomi ezitratweni. Kwaye, ngokuqinisekileyo, iingoma zomgibe nazo zinokwenza iingoma zomdlalo.
Nangona ugibe luqala ukulandelana kuma-1990s, bekungekho ukuqala kwee-2000 ukuqala ukukhula kwiinkcubeko eziqhelekileyo. Njengoko sangena kuma-2000, ii-DJs zaqala ukucubungula umculo we-crunk kunye nama-synths ukuvelisa isandi esicinayo somsindo.
Ukuthandwa komgibe kwafika ngokuvela kwe-Young Jeezy kunye ne-TI I-ATLiens yenza umgibe i-albhamu yazo yokuqala.
Enyanisweni, iTI yabiza i-albhamu yesibili iTrap Muzik.
Ngethuba lakhe lokuqala, u-Jeezy wabonisa ukuba umgibe wawunokwenyama. Ngaphandle kokubambisana kwakhe nomculo, iingoma zakhe zadlalwa kakhulu kwizikhululo zomsakazo eziqhelekileyo kwiNxweme yesithathu nangapha.
Akukho ncoko kumgibe ogqityiweyo ngaphandle kokugubungela kubavelisi abancedisayo ekuphuculeni isandi.
Izitayela zokuvelisa ziyahluka, kodwa abakhiqizi abambalwa abaqingqiweyo yi-DJ Toomp, i-Shawty Red, iDrumma Boy kunye noMannie Fresh.
Emva kokuphumelela kwe-TI kunye ne-Young Jeezy, i-stalwarts yomgibe, abaculi abatsha baqala ukuqaphela. Kule minyaka, abavakalisi abaninzi baye baqalisa ukuhlola isandi. Omnye umdlali ophawulekayo ngumvelisi weLex Luger. Ngo-2010, i-Luger yakhiqiza inqaku elithatha uRick Ross ("BMF") kunye neWaka Flocka Flame ("Hard Pa da Paint").
ITrap Music Today
Umgibe uye wagcina ubukho obuqinileyo kwi-hip-hop kuba kuqhutywe kwiindawo eziqhelekileyo ngo-2009. Namhlanje, ukuthandwa kweKamva, i-Young Thug kunye noDrakake (ukuya kwelinye elingaphantsi) kugcina umgca weflegi uhamba phezulu.
Ngo-2015, omtsha we-Fetty Wap wancinca i-charts ngomgibe onokutshatyalaliswa "nguTy queen Queen". Ekhutshwe nguTony Fadd we-RGF Productions, "iTy queen Queen" yavakaliswa kwiNombolo.2 kwiBhodi yeBhodi yeBhodi 100. I-Fetty Wap ilandelwe nge "Indlela Yami," eyafikelela kwi-Top 20 kwiBillboard.
Ingummiselo wendlela yokuhlala kwamagqabi ukuba abanye abaculi abaqhelekileyo bafumana isandi. Ngo-2015, uDktake wajoyina iKamva malunga nomzamo wokusebenzisana. Le projekthi yavumela uDrakake ukuba ahlole ngokucacileyo umgca wakhe kumgibe kwi-albhamu yonke.
Ngokuqinisekileyo, ukunyuka komgibe kuhambelane nokunciphisa umculo womzala wakhe womzala.
Iingxobo eziphambili zeMgibe
I-Cantata: Imbali kunye Nenkcazo yeFomu yoMculo
Iphrofayili kunye neMbali ye-80s Network Network kunye ne-Music Tastemaker MTV
Iifom zeMculo kunye neeTyles zexesha leBaroque
Konke malunga 'ne-90s Swing Revival
I-Evolution ye-Jazz Saxophone Izitayela
AmaGitars amaGritter best of the 1990s
I-Basic's '80s Music Timeline'
Imbali yeKrismesi Carols: Jingle Bells
IJazz ngeShumi: 1910 - 1920
Imbali yeKrismesi Carols: uCarol weBells
Ama-Documentary Afunekayo-Jonga amaMoriya 'angama-90
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele kaDavid B. Birney
Indlela Yokuba I-Walk-On College
Iilwimi zesiJamani: Indlela yokwazisa iJamani yesiJamani, II
Isikhokelo soMqala kwiCateboarding
I-Las 10 i-más caras para vivir en Estados Unidos
Iifrimu ze-Jazz Fusion eziyimfuneko
UMiguel Hidalgo Wanyusa iMpi yamaMexico yaseMexico
Iindlela zoPawulo kunye nesimo se-Edouard Manet
Ingelosi Eyinkulu Malik: Ingelosi Yesihogo
Iingqungquthela Zilwa neTriton
10 I-Batman Enkulu kakhulu ihlanganisa noJerry Robinson